Iimpazamo eziqhelekileyo xa ubhala incwadi | Uncwadi lwangoku
Ukuba ngenye imini bendicinga ngabo bafundi bakwangababhali, namhlanje ndiyaphinda. Ndikuphathela uthotho lwe iimpazamo eziqhelekileyo xa ubhala incwadi ngubani ongakumbi kwaye ngubani owakhe wazenza kancinci. Ngaba uyavumelana nabo? Ungabeka ngaphezulu?
Iinkcukacha kunye nezichazi ezigqithisileyo zezona zininzi kakhulu kwizicatshulwa ezininzi zoncwadi. Impazamo! Ukwenza ufundo olumnandi, olulula nolonwabisayo, kuya kufuneka ubeke iinkcukacha ezichanekileyo kwaye ungalayishi umbhalo ngaphezulu kwazo. Ezi zinto ziyadika kuphela umfundi kwaye zimenze azive elahlekile ngakumbi nangakumbi kufundo lwakho.
Awuzibeki kwisihlangu somfundi. Xa sibhala, kufuneka sicingisise ukongeza koku sizithandayo, abafundi bethu bayayithanda. Ke ngoko, ngaphambi kokuqala, sicebisa ukuba ukhethe abaphulaphuli ofuna ukubhekisa kubo umsebenzi wakho (abantwana, abantu abancinci, abafundi beenoveli ezithanda inkanuko, abanomdla kwimbali, abasetyhini, njl.) Kwaye ucinge ngalo lonke ixesha, ukuba siyintoni Ukubhala kungathanda abaphulaphuli abakhethiweyo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba xa uzipapasha ngokwakho okanye ipapashwa kuwe, uya kuba nempumelelo.
Sukushiya iziphelo ezivulekileyo. Ngamanye amaxesha zilungile, kodwa inyani kukuba ngenene "inkohliso" ukubhala inoveli elungileyo esishiya silindelwe kude kube sekupheleni ukufumanisa ukuba kuvulelekile kwingcinga nganye nganye. Ezi ziphelo azihlali zithandwa.
Ingxoxo engenziwanga kakuhle. Incoko yabalinganiswa yeyona nto ityhafisa ababhali. Uninzi lwazo ziintsomi kwaye aluqhelekanga; ezinye, nangona kunjalo, zilula kakhulu kwaye azinasiphumo sincinci okanye zineziphumo kwincwadi yonke. Xa usenza incoko yababini, thatha ixesha kwaye uyifunde kaninzi kangangoko kufuneka ngaphambi kokuqhubeka nencwadi yakho.
Amagqabantshintshi okuba sigula kukuva. Amaxesha amaninzi sibhala ii-tagline okanye amabinzana esiwavayo size siwafunde kumacala omabini. Sukuzisebenzisa, kwaye ukuba uyayisebenzisa, mayibe kunqabile. Batyekele ekudiniseni umfundi.
Musa ukubhala isiphelo ngaphezu kokucacileyo ukusuka kwiphepha lokuqala lokufunda kwakho. Iziphelo ezivakalayo ezivela kumaphepha okuqala encwadi zenza ukuba ezinye zityhafise ngenxa yokuba ungashiyi nto kwimibono yomfundi, kwaye kwezi, ngelishwa, zininzi ...
Ndingabeka ezimbalwa, kodwa andizukuba ngumbhali oqhelekileyo we-pedantic (ababalisi abahamba ngeenyawo nabo bahlala beyinto enzima ukuyifunda) kwaye ndikushiya nezi zintandathu. Ngaba ucinga ukuba ndiphosakele ngabo okanye uyavumelana?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iimpazamo eziqhelekileyo xa ubhala incwadi
Ndiyabulisa, Carmen! Igama lam ndinguRafael García. Ndiyingcali yeengqondo kunye nombhali. Ndilungiselela umasifundisane endibize isimo sengqondo sokuba ndibhale. Ithisisi yam kwisayikholoji yayikwimo yokuziphatha. Enkosi ngephepha lakho, linike izixhobo ezibalulekileyo kumasifundisane. Ihagi!
UCarmen Guillen sitsho
URafael olungileyo! Ndonwabile ukufunda ukuba baye baba luncedo 🙂
Phendula Carmen Guillén
Amabinzana okukhumbula uJose Luis Sampedro